Ngwunye SPL maka Mmanụ, Gas & Mining Industry
Ngwunye ike kacha mkpa dị taa bụ Mmanụ na gas. Ọ ghọwo ihe dị mkpa maka ịdị adị nke mmadụ na ihe oriri taa na ndụ nke oge a. Nakwa dị ka isi iyi nke ike n'ụwa niile, ha na-enye akụrụngwa maka ọtụtụ puku ngwaahịa kwa ụbọchị - site na ngwaọrụ elektrọnik na uwe na ọgwụ na ndị na-ehicha ụlọ.
Mmiri na ume bụ isi ihe na-anya mmanụ maka ụlọ ọrụ mmanụ na gas, na-enweghị nke ọ gaghị ekwe omume iwepụta, mepụta ma kesaa mmanụ na gas iji kwụsị ndị ahịa. N'ihi ya, ọ nọ n'okpuru iwu siri ike na-aga n'ihu iji meziwanye akara ukwu gburugburu ya n'oge mmịpụta, mmepụta na nkesa. Ọtụtụ mba gburugburu ụwa ewepụtakwala iwu iji belata anwụrụ na ikuku na-ekesa ikuku, ebe ụlọ nrụcha na-arụpụta ikike imezu ihe ndị chọrọ maka mmanụ ala sọlfọ na-adịghị mma.
Site na mmịpụta - nke dị n'ụsọ oké osimiri na nke ala - iji nụchaa, nhazi, njem na nchekwa, ngwaahịa SPL nwere ezigbo nnyefe ọkụ na-agbanwe agbanwe n'ime usoro hydrocarbon niile. Ngwaahịa anyị na ọkachamara maara otu esi enyere ndị ahịa nọ n'ụlọ ọrụ mmanụ na gas aka ịchekwa ike, nwekwuo arụmọrụ ma belata mmetụta gburugburu ebe obibi ha.